China Diamond kucheka chipande, nedhaimani akaona reza, zvedongo usina kukonekita reza, machena vachicheka reza, girenayiti achicheka reza, akaona reza reza fekitari uye vagadziri | Boda
Daimondi kucheka chipande, nedhaimani akaona reza, zvedongo Tile achicheka nereza, machena achicheka reza, girenayiti kucheka chipande, akaona reza
Daimondi yekucheka blade rudzi rwekucheka chishandiso, icho chinoshandiswa zvakanyanya mukugadzirisa kwezvinhu zvakaoma uye zvinopwanya senge dombo, kongiri, precast slab, migwagwa mitsva neyakare, ceramics zvichingodaro. Dhaimani rekucheka blade rinonyanya kuverengerwa nezvikamu zviviri: iyo matrix uye iyo yekucheka musoro.
Iyo matrix ndiyo huru yekutsigira chikamu cheiyo yakasunganidzwa cutter musoro, nepo iyo yekucheka musoro ndiyo yekucheka chikamu mukuita kwekushandisa. Musoro unocheka uchadyiwa uchienderera mberi uchishandiswa, nepo matrix isingaite, Chikonzero nei iyo yekucheka musoro inogona kutema ndeyekuti ine dhaimondi. Daimondi ndiyo yakaoma zvinhu parizvino, inodambura chinhu chakagadziriswa nekukweshera mumusoro unocheka, uye madhaimani acho akaputirwa mumusoro unocheka nesimbi.
Mukugadzira muitiro wedhaimani kucheka chipande:
1.Sintered madhaimani kucheka chipande: rakakamurwa chando kudzvanya sintering uye kupisa kudzvanya sintering.
2. Welding diamond kucheka chipande: kune maviri marudzi emoto: yakakwira-frequency kutenderera uye laser welding. Yakakwira-frequency kutenderera kunowisira mucheka musoro uye iyo substrate pamwe chete kuburikidza neepamusoro-tembiricha yakanyungudutswa yepakati, uye laser welding inonyungudza iyo yekumucheto kumucheto wemucheki musoro uye substrate kuburikidza neepamusoro-tembiricha laser danda kuti riumbe metallurgia mubatanidzwa.
3. Electroplated diamond diamond blade blade: hupfu hwemusoro unocheka hunosungirirwa kune substrate nenzira ye electroplating.
Kucheka chidimbu kupatsanura:
1. Inoenderera pamupendero saw blade: iyo inoenderera yebasa reza inowanzo gadzirwa neye sintering nzira. Bronze bond inowanzo shandiswa seyekutanga matrix zvinhu. Mvura inofanira kuwedzerwa kuve nechokwadi chekucheka paunenge uchicheka, uye mhando yegap inogona kudonhedzwa nelaser.
2. Blade mhando yekucheka chidimbu: yakaona zino rakatyoka, nekukurumidza kumhanyisa kumhanyisa, yakakodzera nzira dzakaoma uye nyoro yekucheka.
3. Turbine mhando yekucheka blade: inosanganiswa nezvakanaka zvezvinhu zviviri zvekutanga, iro zino zino rinoramba richipa turbine yakafanana yunifomu convex concave, iyo inovandudza iyo yekumhanyisa kumhanya uye inowedzera hupenyu hwebasa.
Mhando dzakasiyana dzedhaimani mashizha akaona akasarudzwa kune akasiyana zvinhu, uye akasiyana eupfu mafomu anokodzera hunhu hwezvinhu zvakasiyana, izvo zvine chinongedzo chakanangana nehunhu, mhedzisiro, chinhanho chekuyera uye kunyange mutengo uye kubatsirwa kwezvinhu zvigadzirwa.
Izvo zvinhu zvinokanganisa kugona uye hupenyu hwedhaimani yakatenderera saha reza iri kutema maitiro paramende, saizi yedhayoni saizi, kusangana, chisungo kuomarara, nezvimwewo Maererano nesimba rekucheka, kune akakwirisa kumhanyisa kwesambo reza, kucheka kwevasungwa uye kudya kwekumhanya.
1. Inokodzera kucheka terrazzo marble.
2. Kucheka kwenzvimbo yesimende, yakaoma inoomarara uye isiri-yesimbi zvinhu.
3. Kugadziriswa kwemugwagwa, bhiriji uye rwizi.
4. Iko kunyorerwa kwemugwagwa wepasi uye wedhorobha dhizaini.
5. Inoshandiswa zvakanyanya mukuvakwa kwemasipareti, kuvakwazve kwemigwagwa, kuvaka nhandare yendege, kongiri yekongiri nedzimwe nzvimbo dzekuvakira, kunyanya inokodzera asphalt nekongiri kugadzirwa kwenzvimbo.
Mukuita, kumhanya kunoenderana kwedhaimondi yakatenderera reza reza kunogumira nemamiriro ezvinhu emidziyo, mhando yejeko resaha uye chivakwa chebwe kutemwa. Panyaya yehupenyu hwakanakisa hwebasa uye nekucheka kugona kwejeko resaha, kumhanyisa kwakarongeka kwejasi resaha kunofanira kusarudzwa zvinoenderana neyakaenzana matombo akasiyana. Kana uchicheka girenayiti, iyo inomhanyisa kumhanya kweakaona blade inogona kusarudzwa munzvimbo dzakasiyana dze25m ~ 35m / s. Kune girenayiti ine yakakwira zvemukati ye quartz uye yakaoma kutema, iyo yepasi muganho wesaha blade mutsara mutsara inomhanya. Mukugadzirwa kwegranite kumeso zvidhinha, hupamhi hwedhaimani idenderedzwa raona chipande idiki uye kumhanya kunoenderana kunogona kusvika 35m / s.
150 mm daimani rekucheka blade, 180 mm diamond diamond blade, 350 mm diamond saw blade, 400 mm inogara ichingori pebble saw blade, 500 mm concrete saw blade, 600 mm diamond wall blade blade, 700 mm wall saw blade, 800 mm diamond murwi wekucheka blade, 900 mm diamond saw blade, 1000 mm diamond saw blade, 1200 mm concrete saw blade.
Chiyero chekudya ndiyo yekumhanyisa yekumhanya yedombo kutemwa. Hukuru hwayo hunokanganisa muyero wekucheka, iro simba pane reza reza uye kupisa kupisa munzvimbo yekucheka. Kukosha kwayo kunofanirwa kusarudzwa zvinoenderana nemhando yedombo rinofanira kutemwa. Kazhinji kutaura, kutema matombo akapfava, senge machena, kunogona kukwenenzverwa nenzira yekumhanyisa yekumhanyisa kumhanya, kana iyo yekumhanyisa kumhanya yakanyanya kuderera, zvinobatsira zvakanyanya kugadzirisa mwero wekucheka. Kana chiyero chekudyisa chakanyanya kuderera, mupendero wedhaimani unogona kuve nyore pasi. Zvisinei, kana kucheka girenayiti pamwe zvinonyadzisa zviyo mamiriro uye gogonera kuoma, inosimbisa kumhanya inofanira kuderedzwa, zvikasadaro saha reza vibration kunokonzera mangoda kutsemuka uye kuderedza sawing zvazvingava. Iyo yekumhanyisa kumhanya kwekucheka granite inowanzo sarudzwa muhuwandu hwe9m ~ 12m / min.
BOSENDA inopa marudzi ese ekucheka disc / Diamond Akaona Nereza / Diamond Kucheka Nereza. Musoro unopinza uye unopfeka kusagadzikana, hupenyu hwaro hwebasa hwakareba kupfuura hwemacheka ekucheka mumusika wese. Isu tinopa zvakatemwa zvakakwana zveakasiyana ekucheka ma disc, uye zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kumakondinendi ese. Tinogona zvakare kuita zvisina-mwero kucheka discs zvinoenderana nevatengi zvinodiwa.
BOSENDA yekucheka disc yemusoro chikamu chakagadzirwa neakakwira mhando yakaoma alloy iyo inoita kuti ma discs awedzere uye awedzere hupenyu hunoshanda.
Pashure: Nyundo yemagetsi, yemagetsi dhizaini chisel, SDS, Max, Hex, yakanongedza chisel, flat flat chisel, ina gomba uye mashanu gomba hexagonal chisel, pneumatic chisel
Zvadaro: Diamond kukuya, mabwe kukuya, machena, girenayiti kukuya, matombo kukuya
Diamond vachikuya, ibwe kukuya, machena, grani ...